Apple waxay kala xaajooneysaa Intel iibsashada qeybteeda modemka casriga ah | Wararka IPhone
Apple waxay kala xaajooneysaa Intel iibsashada qaybteeda modem-ka casriga ah
Mid ka mid ah sababaha Apple waxaa lagu qasbay inuu heshiis la galo shirkadda Qualcomm, waxaa sabab u ah teknolojiyadda 5G, heshiis kuu oggolaanaya inaad isticmaasho moodelada Qualcomm ee la jaan qaadaya 5G jiilka iPhone-ka ee shirkaddu ay daahfuri doonto 2020, ugu horreyntii.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo heshiis la gaadhay, Apple ma rabto inay si gaar ah ugu tiirsanaato Qualcomm mustaqbalka waxayna isku dayeysaa inay xal u hesho. Sida laga soo xigtay The Information, Apple ayaa wadahadal kula jirta Intel si ay u iibsato qaybta ganacsiga ee casriga ah.
Sida laga soo xigtay warbaahintan, Intel wuxuu xiiseynayaa inuu ka takhaluso qaybtaan, laakiin wuxuu doonayaa inuu qaybo ku sameeyo. Qaybta ugu xiisaha badan Apple waa Jarmalka, gaar ahaan shirkadda Infineon, oo ah shirkad ay Intel ku iibsatay 2011 lacag dhan 1.400 bilyan oo doollar oo xarunteeda iyo dhammaan howlaheeda lagu horumariyo Jarmalka.
Heshiiska, oo aan aakhirkii la soo saarin, ayaa ku lug lahaa u dir inta badan injineerada Infineon xarunta Apple's Cupertino ama xarumo kale oo cilmi baaris ah oo ay ka wada qeybiyeen Mareykanka iyo dibadaba.
Intel wuxuu ku dhawaaqay qoraal, in waxay ka tageen horumarintii 5G farsamadaWax yar ka dib heshiiska u dhexeeya Qualcomm iyo Apple ayaa la rasmiyeeyay, hase yeeshe, shirkaddu waxay gacanta ku haysaa tiro badan oo shatiyado ah, taas oo runtii ah waxa Apple aad u xiisaynayso.
Apple waxay saxiixday dhowr maamule oo sare oo ka socda Intel bilihii la soo dhaafay, Stefan Wold wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caansan. Bishii Febraayo ee la soo dhaafay, wuxuu saxiixay Injineerka hormarinta modemka 5G ee Intel.
Haddii labada shirkadood ay aakhirka heshiis gaaraan, uma badna in waqtiga dhow aan arki doono natiijooyinka, markaa waa inaan sugnaa dhowr sano inta Apple ay soo saarayso 5G modem isgaarsiineed ama teknolojiyad ka sarreysa waxqabadkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Apple waxay kala xaajooneysaa Intel iibsashada qaybteeda modem-ka casriga ah
IPhone XR ee soo socda ayaa qaadi doona batariyaal leh 6% awood dheeri ah
iMovie ayaa cusbooneysiineysa ku darista shaashadda cagaaran